Kwiminyaka eyisixhenxe edlulileyo kwiiskrini zaseRussia uchungechunge oluthi "Interns" lwakhululwa, oluye lwaphumelela ngokukhawuleza ukuthanda nokuthanda izigidi zabantu ababukeli ngenxa yokuhleka kwehla kunye nokudlala okwenziwe ngabadlali. Ngombulelo kulo mfanekiso, iinkwenkwezi ezintsha zikhanyise ekugqibeleni kwe-cinema yesizwe, kuquka uSvetlana Kamynina, owayekade engaziwa nawuphi na umntu, owadlala indima engumongameli oyiNtloko uKisegach.
Njengaye heroine, umdlali wezobugcisa ngobomi bokwenene ulandela impilo yakhe kwaye uyamkeleka kwimigaqo yesondlo esifanelekileyo. Ngama-36, uSvetlana ukhangeleka kakhulu kwaye uyamkholisa abalandeli abanomdlalo wezemidlalo kunye kunye nokumomotheka okukhulu. Nguwuphi umthombo wamandla obalulekileyo obungapheliyo omdlali?
Imigaqo-siseko yobomi kaSvetlana Kamynina
USvetlana Kamynina ngumfazi ongaqhelekanga. Esikhundleni sokunyamekela iqabane lomntu kunye nokudala intsapho, uhamba ngehlabathi kwaye wenza izinto zokomoya. Ukuguquka ebomini bakhe kwakukho uhambo oluya eIndiya, apho wayenethuba lokuthetha nabamonki baseTibetan. Umdlali we-actress watshintshile umbono wakhe, waqhotyoshelana nokucamngca kunye ne-yoga kwaye watshintsha kakhulu indlela yokutya. Ugqirha waseTibetan wamfundisa ukuba aphulaphule umzimba wakhe kwaye angawufaki ukutya okungadingekile. U-Svetlana uye washiya ngokupheleleyo inyama, wayeka ukutshaya, akayiphuzi yiselo kwaye akasadli ishukela.
Imithetho esemqoka yesondlo uSvetlana Kamynina
I nkwenkwezi izama ukuhambelana nokutya kwemithetho embalwa elula evumela ukuba izivale kakuhle kwaye ingafumani amakhilogremu angaphezulu.
1. Ebudeni bemini, umdlali weqhinga uzama ukusebenzisa amanzi ahlambulukileyo kangangoko kunokwenzeka kwiqondo lokushisa lokubanda, ngokukhethekileyo ukuhluthwa. Ngentsasa yakhe, njengabaxhasi abaninzi bePP, iqala ngeglasi yamanzi afudumele kwisisu esingenalutho kwisigamu seyure ngaphambi kokutya kwasekuseni.
2. Ukuze ugweme i-edema, umdlali we-actress akacebisi ukusela amaninzi omninzi ebusuku.
3. Ixhasa iKamynin kwiincinci ezincinci ezinama-5-6 maxesha ngosuku.
4. Ukhetha kuphela ukutya okulungele ukulungiswa, ngokukodwa ngokubhekiselele kwiitya zokutshiswa kwezolo.
5. Ukunciphisa ukusetyenziswa kweeshizi kunye namaqanda, wenqaba ngokupheleleyo kwisonka sesonka kunye neklabishi.
6. Ukutya akufanele kushushu kwaye kungabikho kwimeko yokubanda, iqondo lokushisa eliphezulu li malunga nama-40 degrees.
7. Uzama ukuhlala usebenzisa ukutya okuthakazelisayo okuthandayo, ukubeka endaweni yobusi kunye neziqhamo.
Iimpawu kunye nesondlo esifanelekileyo kunye ne-salmonellosis
Uthando olungathandekiyo nento enokuyenza ngayo
Indlela yokubuyisela umtshato kwintsapho
Indlela yokugqoka i-turtleneck kwaye ijonge namhlanje: imizekelo engcono yemifanekiso yefashoni kunye nemifuziselo neefoto
Umdlali wesithandwa uKirsten Dunst
Ukuphuhliswa nokukhuliswa komntwana
Ukuxhomekeka kwesi sifo kwimeko
Ukuwa kwa bantwana abancinci
Unyango lwe-inflammation ye-genitourinary system yomntwana unyaka